Kuratidza zvinyorwa neelebheri pfupa
Kost ndeye gothic castle inowanikwa muBohemian Paradise, munzvimbo yeCadastral Podkost, chikamu chemusha weLibošovice, mudunhu Jičín, mashoma makumi emamirimita kubva kumuganhu weCentral Bohemia neHradec Králové matunhu. Kubva 1991 chave chiri chakavanzika chivakwa chebazi reItaly cheBohemian Count Kinský dal Borgo. Seimwe yevashoma emarenji edu, iyo haisi panzvimbo pechikomo, asi mumupata uri padombo rejecha; Yakamira paruware padombo pakasangana nematombo makuru ematombo. Imwe yacho inotungamira yakananga kuLibošovice uye inonzi Svatoprokopské (zvakare Prokopské), imwe yacho ndeimwe yakanaka kwazvo muBohemian Paradise uye inonzi Plakánek. Yekupedzisira Turnov Valley, iyo yakafanana neyeviri apfuura mvura. Dobroslava Menclová Karlštejn akaisa mamiriro eimba yekugara ye prismatic mukati memhete yakapetwa maviri emadziro. Iyo nhare ichiri yakachengetedzwa chaizvo, kusanganisira nhoroondo yenzvimbo dzakapoteredzwa. Madziva matatu akavakwa akapoteredzwa nhare kumativi ese matatu: Ichena, Nhema…
Kost chivakwa cheGothic chiri muBohemian Paradise, munzvimbo yeCadastral yePodkost, chikamu chemusha weLibošovice, mudunhu Jičín, mashoma makumi emamirimita kubva kumuganhu weCentral Bohemia neHradec Králové matunhu. Kubva 1991 chave chiri chakavanzika chivakwa chebazi reItaly cheBohemian Count Kinský dal Borgo. Seimwe yevashoma emarenji edu, iyo haisi panzvimbo pechikomo, asi mumupata uri padombo rejecha, mamiriro ezvinhu anofananidzwa, semuenzaniso, nemuzinda weOliř pedyo nePrague). Yakamira paruware padombo pakasangana nematombo makuru ematombo. Imwe yacho inotungamira yakananga kuLibošovice uye inonzi Svatoprokopské (zvakare Prokopské), imwe yacho ndeimwe yakanaka kwazvo muBohemian Paradise uye inonzi Plakánek. Yekupedzisira Turnov Valley, iyo yakafanana neyeviri apfuura mvura. Dobroslava Menclová Karlštejn akaisa mamiriro eimba yekugara yeprisitital mukati memhete yakapetwa maviri emadziro. Iyo nhare ichiri yakachengetedzwa chaizvo, kusanganisira nhoroondo yenzvimbo dzakapoteredzwa. Madziva matatu akavakwa akapoteredzwa nhare kumativi ese matatu: Ichena, Nhema…